ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 2012
လက်ပန်ပွင့် ။ လက်ပံပွင့် ။ နီနီရဲရဲ အညာရနံ့သင်းတဲ့ လက်ပန်ပွင့်တွေ အညာလွမ်းသူများအတွက် ။ လက်ပန်ပွင့်ခြောက် နဲ့ ၀က်သား ချက်စားချင်သူများ ယူနိုင် ကူးနိုင် ကော်ပီ နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ :)
DatE Saturday, November 24, 2012 LaveL kyaukpadaung, လက်ပန်ပွင့်, အညာ, ကျောက်ပန်းတောင်း 1 comments link this
The Best View Of Kyaukpadaung Town that I found in Google Map. ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့ရဲ့ အလှပဆုံး မြင်ကွင်းကို ကျွန်တော် တွေ့ရှိခဲ့တယ် ။ မင်သက်မိသွားခဲ့တယ် ။ လွမ်းလိုက်တာ ဇာတိမြေရယ် ။
DatE Tuesday, October 30, 2012 LaveL kpg, kyaukpadaung, oasis, ဘာကြောင့်လဲ0comments link this
အထက (၁) အထက (၂) ကျောက်ပန်းတောင်း
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ အထက (၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း (BEHS 1)
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ အထက (၂) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း (BEHS 2)
DatE Tuesday, October 30, 2012 LaveL kpg, kyaukpadaung, ဇာတိမြေ0comments link this
ပုပ္ပါးတောင် မြောက်ဘက်မှ မြင်ရပုံ ။
ပုပ္ပါးတောင် မြောက်ဘက်မှ မြင်ရပုံ ။ mount popa . မန္တလေးတိုင်း မြင်းခြံခရိုင် ကျောက်ပန်းတောင်း က ပုပ္ပါးတောင်။ (((( ကိုချမ်းဟိန်းအောင် ရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှ ကူးယူပါတယ် )))))
DatE Saturday, September 22, 2012 LaveL kpg, kyaukpadaung, Mount Popa, popa, ပုပ္ပါးတောင်, မီးတောင်, အညာ, မွေးရပ်မြေ0comments link this
ကျောက်ပန်းတောင်းက သုဂတိရှင် ...။
သုဂတိရှင် နာရေးကူညီမှု အသင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း) ၏ ယခင် ဓာတ်ပုံ အဟောင်းများ သိမ်းထား လိုက်ပါတယ် ။
DatE Sunday, September 16, 2012 LaveL kpg, kyaukpadaung, Mount Popa, PhoTooooooO, ဘာကြောင့်လဲ, ကျောက်ပန်းတောင်း0comments link this
ကျောက်ပန်းတောင်း-ညောင်ဦး လမ်းက မရောင့်ရဲချောင်း ဖြတ်ကူးရတဲ့ ဒုက္ခ ။
ကျောက်ပန်းတောင်း-ညောင်ဦး လမ်းက မရောင့်ရဲချောင်း ဖြတ်ကူးရတဲ့ ဒုက္ခ ။ Kyaukpadaung - Nyaung Oo
DatE Sunday, September 16, 2012 LaveL ancient city, kyaukpadaung0comments link this
DatE Tuesday, August 14, 2012 LaveL မန္တလေး, နေပြည်တော်0comments link this
Mount Popa (oasis)
Mount Popa ပုပ္ပါးတောင် တည်နေပုံအား ကြက်မောက်တောင် ဆည်ဘက်မှ မြင်ရပုံ ။
DatE Tuesday, August 14, 2012 LaveL Mount Popa, oasis, popa, Pozzolan, ပုပ္ပါးတောင်0comments link this
တို့ချစ်တဲ့ အမေစု လဲ မောင့်ကြက်သရေခေါင်းပေါင်းနဲ့ဗျာ.. နောင်လာနောင်သားမှာ မှတ်သားဖွယ် မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ် ။ ပြည်သူ့လွတ်တော်ကနေ print screen ဖမ်းယူထားတာပါ ။
DatE Tuesday, August 14, 2012 LaveL ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်0comments link this
အညာမြေက ထာဝရ အိုအေစစ် အတွက် စိတ်ကူးသစ် ။
အညာမြေ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ သောက်ရေ သုံးရေ ဖူလုံရေးအတွက် ဧရာဝတီမြစ်မှ မြစ်ရေတင် စီမံကိန်း စိတ်ကူးထားပါတယ် ။ အစီအစဉ်ကား. ယခင် အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ခံ ဘဝတည်းက ပုပ္ပါး ဗိုလ်နတ်ကျော် နှင့် ငါ့သရောက် ဗိုလ်ချို တို့ လူသူလက်နှက် စည်းရုံးရေးဆင်းသော လမ်းဖြစ်သည့် မြေနီကျောက်ခင်းလမ်း ကျောက်ပန်းတောင်း - ငါ့သရောက် လမ်း မိုင် ၂၀ ခန့် ( မြေပုံတွင် ကြည့်ပါ) အား ထပ်မံတိုးချဲ့ ဖောက်လုပ်မည်ဖြစ်သည် ။ ၄င်းမှတဆင့် မြန်မာနိုင
်ငံ အရှည်ဆုံး မြစ်ကူးတံတားဖြစ်သော လက်ပန်ခြေပေါ် ပခုက္ကူ မြစ်ကူးတံတား သို့ (၁၀ မိုင်ခန့်) လမ်းဖောက်လုပ်မည်ဖြစ်သည် ။ ယင်းလမ်း (ကျောက်ပန်းတောင်း-ငါ့သရောက
်-ပခုက္ကူတံတား) မှတဆင့် ချင်းတွင်းဧရာ မြစ်ဆုံ ရေအား ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့သို့ မြစ်ရေတင် စီမံကိန်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည် ။ မိုးရေကို အားကိုးထား သောက်သုံးနေ ရသော မြို့နယ်သူ မြို့နယ်သားများအတွက် .. ရေမရရှိသောေ ကြာင့် ဖြစ်ပွားတတ်သော ၉၆ ပါး ရောဂါဘယ မျိုးစုံ ကင်းဝေးကာ ရေအရေး စိတ်အေးစေဖို့ အတွက် စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဧရာဝတီ မြစ်ရေ၏ 0.000000000000001 သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ 2015 မှာ ကျွန်တော် တသီး တပင် အမတ်အဖြစ် ဝင်ပြိုင်တဲ့အခါ လွှတ်တော်မှာ တောင်းဆိုပါမယ် ။ မဲပေးကြပါလို့....... :)
DatE Tuesday, August 14, 2012 LaveL kyaukpadaung, oasis, ဇာတိမြေ, ကျောက်ပန်းတောင်း0comments link this
ကြည့်ကြစမ်းဟဲ့.. တို့တိုင်းနိုင်ငံ အဘယ်လောက် ချမ်းသာသလဲ.. ဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းတွေ .. ရေလုပ်ငန်းဝင်တွေ.. ကျောက်မျက်ရတာနာတွေ.. တွင်းထွက်ကုန်တွေ (မွေ ဖွတ် ပတတ် တောင်ပြည်ပပို့တယ်) . တာတမံတွေတုတ် လျှပ်စစ်တွေထုတ်.ရောင်းတယ် . ပြည်ပသွား လုပ်သားဝင်ငွေရ
ှိသေး ။ ချေးငွေပေါင်းများစွာ........ ဒါတင်လားဟဲ့ ဘယ်ကမလဲ.. အငှာချထားတဲ့ မြေတွေ ကြည့်စမ်း. ထားဝယ် .. စစ်တွေ . မြန်မာပြည် ထက်ပိုင်းပိုင်းတဲ့ မဟာ ဓာတ်ငွေ့လိုင်း. တောင်တန်းတွေကြားက လီးဒိုးကြီးတောင် ပြန်စတော့မယ်ဆိုပဲ.. ချမ်းသာလိုက်တာ ကျိကျိတတ်လို့ ။ ဒီဝင်ငွေ ဘယ်ရောက်ကုန်လဲ မမေးချင်ပါဘူး..သို့ပေမယ့် အနာဂါတ်အတွက်.. နောက်တခါ ၂၀၁၅ မဲပေးရရင်ဖြင့် ပညာရေးကို အဓိကထား ဘတ်ဂျက်သုံးမယ်ဆိုမှ မဲပေးမယ်ကွယ် ။
facebook မှ ကူးထားသည်။
DatE Tuesday, August 14, 2012 LaveL Myanmar, မြန်မာ0comments link this
လာလည်ပါ လေးရွာတစ်တန်း စခန်းသာ
သာယာတဲ့ လူ့ဘောင်စခန်းကို လှမ်းစို.. တူမကွာ..
လက်ပန်ကျင်းခေါ် လေးရွာတစ်တန်းကိုလာရောက်လို့ လေ့လလည် စမ်းပါ…။
ချောင်းရေလျင် ကြည်ကြည်အေးလို့ပါ ။
စပါးပင်တွေ ယိမ်းနွဲ့လို့သာ ။
ရှင်မကြွယ်လူး တောင်တော် သာသာယာယာ
ကိုးတောင်ပြည့် စေတီဘုရားကို ဖူးတွေ့ရမှာ ။
ရွှေညောင်ပင် အနောက်ဘက် စခန်းထိ
ပြည်သူ့ ယာခင်းတွေက သာ.....။
ငယ်စဉ်က ရွာမှာ ဒိုးပတ်နဲ့ ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်း (သိပ်မမှတ်မိတော့သလို သံစဉ်လဲ သိပ်မရတော့ဘူး) မှတ်မိသလောက် ချရေးထားတာ ။
DatE Wednesday, August 01, 2012 LaveL ဇာတိမြေ 1 comments link this
၁။ ဒေါက်တာ ကံမင်းအောင်
၂။ ဒေါက်တာ ကျော်သူဝင်း
၃။ ဒေါက်တာ ဇော်မင်းလတ်
၄။ ဒေါက်တာ ဟန်ဇော်လင်း
၅။ ဒေါက်တာ လှိုင်မျိုးအောင်
၆။ ဒေါက်တာ ဖြိုးကျော်သူ
၇။ ဒေါက်တာ ခင်မြင့်မြင့်စံ
၈။ ဒေါက်တာ ချစ်ချစ်ထူး
၉။ ဒေါက်တာ ဇင်မာဦး
၁၀။ ဒေါက်တာ ဆုမွန်ပန်
၁၁။ ဒေါက်တာ ယဉ်မာဌေး
၁၂။ ဒေါက်တာ လဲ့ယဉ်ဝေဖြိုးသူ
၁၃။ ဒေါက်တာ ခိုင်ဇာယုရှိန်
ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် - ဦးမြင့်ဦး၊ မနှင်းဟေမာန်၊ မနွယ်နီဝင်း၊ မသန္တာဆွေ။
လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ အကူအညီတောင်းခံရန်နှင့် လှူဒါန်းငွေများ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ-
မုဒိတာ ပရဟိတလူမှုရေးအသင်းသို့ သီးခြားလှူဒါန်းလိုပါက-
၁။ ဆေးကုသမှု တစ်ရက်ပျမ်းမျှ - ၂၀၀၀၀/ ကုန်ကျငွေ
၂။ ဆေးဝါးပစ္စည်းများအတွက် ငွေပဒေသာပင်စိုက်ထူ လှူဒါန်းခြင်း
၃။ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ
၄။ စာကြည့်တိုက်အတွက် စာအုပ်အမျိုးမျိုး၊ စာစောင်များနှင့် ဂျာနယ်များလည်း လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ဖုန်း - ၀၉-၄၃၁၃၇၄၀၈
DatE Sunday, March 04, 2012 LaveL kpg, kyaukpadaung0comments link this
A villager Farmer
DatE Tuesday, February 14, 2012 LaveL kpg, kyaukpadaung0comments link this
my native (kyaukpadaung)
farm at my native (kyaukpadaung)
DatE Tuesday, February 14, 2012 LaveL kyaukpadaung0comments link this
လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေး
ဤစာ ရေးသားချိန်တွင် ကျွန်တော်သည် ပြည်ပနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်နေပါသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းပြည်တွင် အလုပ်လုပ်ရင်း သတင်းဂျာနယ်များမှ မြန်မာပြည်အကြောင်း သတင်းများ ဖတ်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Eleven Media မှ ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း အကြောင်း ဆောင်းပါးများ ဖတ်ရသောအခါ ကျွန်တော်၏ လုပ်ငန်းခွင်မှ အတွေ့အကြုံများအား ရေးသားမျှဝေလိုသည်။ ရေနက် ဆိပ်ကမ်း ကဲ့သို့သော ပင်လယ်ရေကြောင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ပရောဂျက်များသည် ကျွန်တော်နှင့် မစိမ်းလှပေ။ ကျွန်တော်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နာမည်ကြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုဖြစ်သော Keppel group ၏ လက်အောက်တွင် အလုပ်လုပ်နေသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် မြင်တွေ့ ထိတွေ့နေရသော လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများအား ပြည်တွင်း စာဖတ်သူတို့ သိရှိစေရန် ရေးသားမျှဝေ လိုက်ပါသည်။
နှစ်ရှည်စီမံကိန်း လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ထားသော ကုမ္မဏီသည် တာဝန်လွန်ကြီး၏။ တာဝန်ယူရသည့် အပိုင်းများစွာရှိ၏။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် တတ်သိ နားလည်သော ပညာရှင်များဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အဖွဲ့များဖွဲ့ကာ အလုပ်သမားများ၊ စက်ပစ္စည်း များ အန္တရာယ်ကင်းရေး လုပ်ဆောင်ရသည်။ အလုပ်ရှင်မှ လိုအပ်သည်များ တာဝန်ယူ ဖြည့်ဆည်း ပေးရ သည်။ ပြည်တွင်း ဆောက်လုပ်ရေး၊ လမ်း တံတား စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများတွင် ကျွန်တော် အလုပ်မလုပ် ခဲ့ဖူးပါ။ သို့သော် ယခု ကျွန်တော် လုပ်ကိုင် နေရသော လုပ်ငန်းခွင်မှ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းရှိ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံများအား ဗဟုသုအဖြစ် မျှဝေလိုပါသည်။
နှစ်ရှည် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ ပိုင်ဆိုင်သူသည် အောက်ပါ အခြေနေများအား တာဝန်ယူ ဖြေရှင်း လုပ်ဆောင်ပေးရသည်။
၁။ လူဦးရေ ထူထပ်မှု။ ။ နှစ်ရှည် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ လုပ်ငန်းများတွင် လူဦးရေ ထူထပ်စွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော အခြေနေ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ တစ်နေရာတည်း၌ လူဦးရေ များစွာ လုပ်ကိုင်စေခြင်း (သို့) နေထိုင်စေခြင်းကြောင့် (အောက်စီဂျင် မလုံလောက်ခြင်း) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် ရှိလာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မလိုအပ်ဘဲ အလုပ်သမားများအား ထူထပ်စွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းအား ထိန်းချုပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
၂။ လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်မှု။ ။ နှစ်ရှည် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်များတွင် လုပ်ကိုင်ရသော အလုပ် သမား များအတွက် လုပ်ငန်းခွင် နေရာသည် လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်သည်။ အချိန်ကြာမြင့် စွာ လုပ်ကိုင်ရသော နေရာများတွင် လေကောင်းလေသန့် ရှိရန် သဘာဝအလျှောက်ဖြစ်စေ၊ စက်ပစ္စည်း အကိုညီ များဖြင့် ဖြစ်စေ လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်ရန် Blower Vent, Exhaust Vent များထားရှိပေးရမည်။ သို့မှသာ လုပ်ငန်းခွင်သည် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ကာ အလုပ်သမားများအတွက် ရေရှည် လုပ်ကိုင်ရန် သင့်တော် ပေမည်။
၃။ အလင်းရောင် ကောင်းစွာရရှိမှု။ ။ လုပ်ငန်းခွင်နေရာသည် အလင်းရောင် ကောင်းစွာ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ သဘာဝ အလင်းရောင် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်မီး အလင်းရောင်များ တပ်ဆင်ပေးထားရမည်။ အလင်းရောင် ကောင်းစွာရရှိမှ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်သမားများ တနေရာမှ တနေရာသို့ သွားလာ လုပ်ကိုင်ရာတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမည် ဖြစ်သည်။
၄။ တုန်ခါမှုအား ထိန်းချုပ်ခြင်း။ ။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် စွမ်းအားမြင့် အင်ဂျင်စက်များ အသုံးပြုရ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တုန်ခါမှုများအား ထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ လွန်ကဲစွာ တုန်ခါမှုကြောင့် လူသို့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေမှုအား ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရန် အရေးကြီးသည်။ တုန်ခါသော စက်များဖြင့် နှစ်ရှည် လုပ်ကိုင်မှုကြောင့် လူ၏ခန္တာကိုယ်တွင်း ဖွဲ့စည်းမှုအား အန္တရာယ် ဖြစ်စေတတ်သည်။ ထို့အပြင် ဆူညံသော အသံများ ဖြစ်စေသော အင်ဂျင်၊ ဂျင်နရေတာစက်များအား အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာဖြင့် ထိန်းချုပ်ရမည်။ ဆူညံသော အသံများကြောင့် နား အကြားအာရုံ ချို့ယွင်းမှု ဖြစ်စေနိုင်သည်။
၅။ အပူဒဏ် အအေးဒဏ် အကာကွယ်ပစ္စည်းများ။ ။ပူသော ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ရန်၊ အေးသော ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ရန်၊ အဆိသင့် ဓါတုပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ရန်၊ သက်ဆိုင်ရာ အကာကွယ်ပစ္စည်းများ ထားရှိပေးရမည်။ စနစ်တကျ ကိုင်တွယ် အသုံးပြု နိုင်ရန် သင်တန်းပေးရန် အလုပ်ရှင်တွင် တာဝန်ရှိသည်။
၆။ အိမ်သာ သန့်စင်ခန်းများ။ ။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်သမား များအတွက် သင့်တင်သော သန့်စင်ခန်းများ လုံလောက်စွာ ထားရှိပေးရမည်။ ၄င်းသန့်စင်ခန်း များအား သန့်ရှင်းမှုအတွက် နေ့စဉ် ထိန်းသိမ်းမှု ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အညစ်ကြေး စွန့်ပစ်မှု ကောင်းမွန်သော သန့်စင်ခန်းမှာ ရှိမှသာ အလုပ်သမားများအတွက် ဝမ်းနှင့်ပတ်သက်သော ကျန်းမာရေး ပြသနာများ မှ ကင်းဝေး မည်။
၇။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ရေနှုတ်မြောင်းများ။ ။ လုပ်ငန်းခွင်မှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်များ စနစ်တကျ စွန်ပစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဓါတုဆေးဝါးဓာတ်သတ္တိပါသော ရေဆိုးများအား စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရန်လိုသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် လေထုညစ်ညမ်းမှု၊ ရေထုညစ်ညမ်းမှု မဖြစ်စေရန် ရေရှည်အတွက် စဉ်းစားကာ စွန့်ပစ်ရမည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ရေနှုတ်မြောင်းများလဲ ကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်သည်။ ရေဝတ်လျှင် ခြင်များ ပေါက်ပွား လာနိုင်သည်။
အထက်ပါ အချက်လက်များသည် စာရေးသူ လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းခွင်မှ မြင်သိ တွေ့ထိမှုအား အခြေခံ ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်သည်များရှိပါက အားမနာတမ်း မှတ်ချက်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီကြပါ ခင်ဗျာ။
DatE Tuesday, February 14, 2012 LaveL safetyfirst0comments link this
အထက(၁) ကျောက်ပန်းတောင်း (28-12-2012) ဆရာကန်တော့ပွဲ...
ကျောက်ပန်းတောင်း-ညောင်ဦး လမ်းက မရောင့်ရဲချောင်းြ...